'Akusithikamezanga kakhulu ukuhlehliswa komdlalo weCAF,' kusho uPhilani Zulu weKaizer Chiefs - Impempe
‘Akusithikamezanga kakhulu ukuhlehliswa komdlalo weCAF,’ kusho uPhilani Zulu weKaizer Chiefs
February 15, 2021 Impempe.com
UPhilani Zulu weKaizer Chiefs
Ukuhlehliswa komdlalo weKaizer Chiefs ebizobhekana kuwo neWydad Athletic yaseMorocco kwiCAF Champions League ngeSonto kuziphazamisile izinhlelo zeqembu, kodwa mhlawumbe bukhona ubuhle obuphume kulesi sigameko.
Umdlali wasevuva kuMakhosi, uPhilani Zulu ukhethe ukubheka ubuhle balesi simo esingesihle iqembu elizithole selikuso ngeviki eledlule. (Funda lapha: https://bit.ly/3po28kX)
“Ngingasho ukuthi kukhona la kumoshakale khona,” kusho uZulu ngoMsombuluko. “Kodwa akukubi kakhulu ngoba kusinike isikhathi esanele sokuzilungiselela, sibhekane nomdlalo weligi lo esiya kuwo.
“Sithole nesikhathi sokuthi sihlale phansi njengeqembu sikhulume ngokuthi yikuphi la konakele khona, nala kumele sipheshe khona.
“Leli khefu lisisize kakhulu ngoba lisinike ithuba nathi singabadlali lokuthi sizinuke amakhwapha, sibone nokuthi singasiza kanjani eqenjini,” kuchaza le nsizwa ezalwa eMgungundlovu.
NgoMsombuluko ekuseni Impempe iveze izindaba zokuthi lo mdlalo weCAF Champions League usuzodlalwa ngoLwesihlanu eCairo, eGibhithe (funda udaba la: https://bit.ly/3po28kX) kodwa ngathi lowo myalelo ubungakafiki kwiChiefs ngoba yona isibheke koweDStv Premiership ongoLwesithathu.
“Lo mdlalo wangoLwesithathu esizowudlala naMaZulu ubalulekile futhi akusamele sibheke okwenzekile phambilini, sekudlulile. Uma ubheka indlela abadlala ngayo manje uyabona ukuthi sebethe ukulikhuphula izinga.
“Badlalisana kahle ngokubambisana njengeqembu – noma ngabe baya phambili bayohlasela, noma besemuva bemaka. Kuzomele siye kulo mdlalo sizilungiselele ngayo yonke indlela.
“Lawo malungiselelo asahambe kahle osekusele manje wukuthi ebesizilolonga kukho sikwenze enkundleni ngoLwesithathu,” kusho uZulu. Uveze nokuthi njengoba sekungenwa emzuliswaneni wesibili kwiligi, asisekho isikhathi sokusinisa amahleza.
“Sekuyisitebhisini sokugcina ngoba sekudlalwa umzuliswano wesibili nje, wonke amaqembu asedlalela ukufa nokuphila. Namaqembu ale ezansi ngeke usasho ukuthi iwona indlela asedlala ngayo ngoba wonke umuntu usedlala ngokufana manje.
“Sekubaluleke kakhulu ukuthi uma nidlala niqoqe wonke amaphuzu. Abaphezulu sebedlalela ukuthi bengasuki. Nathi siyiKaizer Chiefs sizimisele ngokuthi umdlalo nomdlalo esizowudlala siwuthathe ngokuthi owamanqamu.”
Ezakamuva, Ibhola lomhlaba, iDStv Premiership
Previous Previous post: ‘Kubuhlungu impela kodwa usephumule ezinhlungwini uBra Mzi,’ kusho uNcita
Next Next post: Igolozisa okwembuzi inqaba ukuya emsamo ukusuka emsileni iCape Town Spurs